Mpanazatra mpanafika 35 Vip madrid seza -mikrobus ary Bus Bus minibus Mpanazatra mpanafika 35 Vip madrid seza -mikrobus ary Bus Bus minibus
35 Mpanazatra manafatra Plazas Vip any Madrid
Ahoana no fomba itiavan'ilay mpivarotra 35 plana Plazas Vip madrid
Ny orinasam-pifandraisan-davitra 35 Plazas Vip Madrid, ny bus Torres SL dia iray amin'ireo orinasam-pitaterana tsara indrindra ao Espaina sy Eoropa.
Noho ny tantarany lava, isan'andro dia matoky kokoa ny mpanjifa ny manome azy ireo ny dia ataony na ny serivisy hanatanterahany.
Ny fiarandalambentsika dia iray amin'ireo tsara indrindra, hatramin'ny antsika rehetra Mpanazatra ny seza 35 Manana ny teknôlôjia farany sy seza tsara izy ireo, izay mety tsara hialana sasatra mandritra ny fitsangatsanganana lava na handefa ny hatsiaka rehefa tonga any amin'ilay toerana.
Amin'ny lafiny iray ny mpanazatra ambonin'ny zava-drehetra, izy ireo foana entin'ny matihanina tsara indrindra ny fitaterana-anivon'ny mpanazatra nanakarama 35 Plazas Vip Madrid, toy ny tsirairay dia samy manana avo lenta ny teny anglisy, araka izay manampy antsika hahazo kokoa, ny avy any ivelany ny mpanjifa sy ny hanorina fifandraisana tsara kokoa sy tsara kokoa fifanarahana amin'ny mpandeha isan-karazany.
Dingana manaraka ny fanofanana mpanafatra mpanazatra 35 Plazas Vip madrid
Inona ny serivisy nangatahiko ho an'ny mpanafatra mpanafatra 35 Plaza Vip Madrid?
Ny serivisy misy ny orinasa dia sady mety manakarama mpanazatra 35 Plazas Vip madrid, ny manakarem-pahefana 35 Vip Vip, Seza 50 Vip na mpiasan'ny seza 71.
Ankoatry ny zavatra hafa; Mety tsara izy ireo noho izany diany, na mafy te hizaha na ny fitetezam-paritra tao an-tanàna, na marina, dia afaka manao ny raharaham-barotra koa ny mpanazatra, ny licence / a, fampakaram-bady na ny lavitra.
Ny iray amin'ireo tolotra tsara indrindra, dia ny fanolorana mpitaingina kitroka 35 Vip, izay manana ihany, amin'ny ivelany, miaraka amin'ny fitambaran-tady mena, volombava ary volom-borona mena amin'ny lafiny roa.
Hatramin'ny afovoany, ny seza dia vita amin'ny hoditra, ary ny kitapo mainty, miaraka amin'ny kofehy mena eo amin'ny rambon'ilay seza, ary ny takelaky ny loko fotsy; fifandimbiasana loko tanteraka.
Mifandraisa amin'ny orinasa, amin'ny alàlan'ny mailay info@torresbus.es Na raha tianareo ny hiantso ny telefaona 24 ora + 34 607 372 252, ary faly, iray amin'ireo solontenan'ny varotra antsika dia hanatrika anareo ary hanamarika ny fanompoana izay tena ilainareo.
Halefanao amin'ny antsipiriany ny teny, na miantso ny nomeraon-telefaoninao.
Tsarovy fa ny tolo-kevitra momba ny teti-bola dia malalaka tanteraka ary tsy misy fanoloran-tena.
Raha manapa-kevitra, ary te-hanao ny teti-bola amin'ny alalan'ny mailaka, tsy maintsy manondro ireto fampahalalana manaraka ireto, ka ny raharaham-barotra dia afaka manao teti-bola mora vidy kokoa sy marina, na lalana lavitra izay tianao hatao, tsy latsa-danja intsony.
Fampiantranoana ny 35 Mpanazatra Vip Plazas ao Madrid: endrika famandrihana ny mpanazatra
Daty tokony hapetraka ao amin'ny mailaka:
Andro fialan-tsasatra sy fialan-tsasatra - Fialan-tsasatra sy famerenana amin'ny laoniny - Toerana misy ny toerana fialana sy toerana; dia asongadino fa ny hetsika dia hatao any amin'ny toerana misy azy manakarama mpanazatra 35 Plazas Vip madrid na raha tsy izany dia hitondra sy hampody indray.
Ny isan'ny olona ary raha tsy mitondra entana ianao; ny nomeraon-telefaona, ny anarana sy ny anaram-bosin'ilay olona nangatahana ny antsipiriany, ny mifandray aminay na amin'ny mailaka na antso an-telefaona.
Raha te-hanamafy ny teti-bola ianao, ary noho izany dia ataovy ny fandoavana ny vola aseho amin'ny dokambarotra, azonao atao izany amin'ny alalan'ny fomba telo samihafa:
Azonao atao ihany koa ny mandoa 40% amin'ny totalin'ny vola amin'ny alalan'ny famindrana banky sy ny sisa 60% amin'ny fotoana hahatongavan'ny mpamily ary alohan'ny hanatanterahana ny serivisy.
Azonao atao ihany koa ny mandoa 60% amin'ny alalan'ny famindrana banky sy ny sisa 40% amin'ny fandefasana
Azonao atao ihany koa ny manefa ny fandoavam-bola amin'ny alalan'ny famindrana banky.
Fivarotana fiara fitaterana any Madrid ho an'ny sakafo hariva
Fanofana fiara an-tanimbary misy seza mahazatra ho an'ny dia lavitra
Fanofana fiara miaraka amin'ny milina kafe
Fanofana fiara madinidinika amin'ny seza 37 na seza 39 ao Madrid ho an'ny orinasan-tsakafo atoandro
bus miaraka amin'ny fiara madinidinika wifi miaraka amin'ny wifi usb rent amin'ny madrid
Autobus vip disco amin'ny madrid
buses madrid minibuses amin'ny madrid amin'ny goro
tanànatour madrid andro alina alina alina minibus bus bus hire minibus
Antoko fahaleovantena madinidinika any Madrid miaraka amin'ny latabatra minibus miaraka amin'ny latabatra
microbuses amin'ny madrid ho an'ny hofaina miaraka amin'ny mpamily ary miaraka
Minibus avec madrid vip dinners à excursions guided Tours panoramicas
minibus miaraka amin'ny seza malalaka lehibe Madrid
minibus ho an'ny hofidina amin'ny madrid ho an'ny olona 39
Minibus ho an'ny hofan-trano any Madrid
usb ports amin'ny madrid
35 Mpanazatra manafatra Plazas Vip any Madrid November 30th, 2017Fampiofanana mpampiofana